प्रदेश नं १ Archives - Page 369 of 426 - Purbeli News
अाफ्नै कारणले अादिवासीहरू पछाडी परे – बैरागी काइला
धरान । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति तिल विक्रम नेम्बाङ्ग (बैरागी काइला) ले आदिवासीहरुकाे धर्म संस्कृति संकटमा पर्दै गएकोबताएका छन । युमा साम्यो महासभा नेपालले सुनसरीकाे धरानमा अायाेजना गरेकाे युमा मुन्धुम धर्म र दर्शन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन । उनले पछिल्लो समय रा...
स्रोत नहुँदा खोलाको पानी पिउन बाध्य छन मेचिनगरवासी
झापा । झापा मेचीनगरका तीन वटा वडाका साढे चार हजारभन्दा बढी घरपरिवार खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । पिउने पानीको अन्य स्रोत नहुँदा उनीहरु खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका हुन् । मेचीनगर नगरपालिका– १, २ र ३ नं वडामा बासोबास गर्ने चार हजार ५५० घरपरिवारका १६ हजार जनाकोे बसोबास रहेको स्थानमा पानीको समस्या रहेको उक्त नगरपालिकाका सूचना अधिकृत अशोक भेटवालले जानक...
बुद्धकाे मुर्ति सफा गर्ने हुदा माेरङमा एककाे मृत्यु
पथरी शनिस्चरे । साेमबार हुने बुद्धजयन्तिकाे कार्यक्रमकालागि बुद्धकाे मुर्ति सफा गर्ने क्रममा अाइतबार माेरङ पथरी शनिस्चरे २ बुद्ध चाैकका ५२ बर्षीय लाेक बहादुर तामाङ ( याेञ्जन)काे करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाे छ । पथरी शनिस्चरे २ बुद्ध चाैकमा रहेकाे मन्दिर सजाउन माथी चढेर बुद्धकाे खजुर सफा गर्नेक्रममा छेउमै रहेकाे बिजुलिकाे पाेलमा रहेकाे तारले भेटेपछि कर...
ट्राफिक प्रहरीद्वारा १६ लाख बढी राजस्व संकलन
इनरुवा । आर्थिक वर्ष २०७४ सालमा ट्राफिक प्रहरी पोस्ट भाणटावारीले १६ लाख ६९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । नियम उल्लंघन गरी सवारी साधन चलाए बापत ट्राफिक प्रहरी पोस्ट भाणटावारीले आर्थिक वर्ष २०७४ श्रावण महिना देखि चैत्र मसान्तसम्म मा सो बराबरको राजस्व संकलन गरेको ट्राफिक प्रहरी पोस्ट भाणटावारीका इन्चार्ज गणेश श्रेष्ठले बताएका छन । श्रेष्ठका अनुसार २०७४...
खुल्ला ठाउमा शाैच गर्नु हुन्न भनेर पाठ पढाउने शिक्षक अाफै जंगलतिर छिर्छन ….
तेह्रथुम । खुला दिसामुक्त जिल्लाका शिक्षक नै शौच गर्न जंगलतिर जान्छन्भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर तपाई अचम्मित नहुनुहोस्, यो घटना यथार्थ हो । शौच गर्न जंगलतिर जानु शिक्षकको रहर होइन्, यो उनीहरुको बाध्यता हो । खुला दिसामुक्त घोषित जिल्ला तेह्रथुमका दर्जन बढी सुख्खाग्रस्त गाउँका विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शौच गर्न जंगल छिर्छन् । शौच गरिसके...
अरुण तेस्रोको प्रशासनिक भवन अघाडी बम बिस्फाेट
संखुवासभा । बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रोको प्रशासनिक भवनको कम्पाउन्ड वालमा वम विस्फोट भएको छ । तुम्लिङटारमा रहेको अरुण तेस्रोको नव निर्मित प्रशासनिक भवनको कम्पाउन्ड वालमा शनिबार राती बम विस्फोट भएको हो । प्रहरीका अनुसार राती १२ बजे वम विस्फोट भएको हो । विस्फोटका कारण वालमा सामान्य क्षति पुगेको प्रहरी निरिक्षक वेदप्रसाद गौतमले बताए । घटनाको जिम्मा कसै...
खानेपानीकाे खोजीमा तेह्रथुमका स्थानीय आधारातमै पुग्छन् धारा
तेह्रथुम । जिल्लाको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीयहरु खानेपानी अभाबका कारण आधारातमै पानी भर्न धारा धारामा पुग्ने गरेका छन । जलबायु परिवर्तन सँगै गाउँ गाउँमा भएका मुहानहरु सुक्दै गए पछि खानेपानी अभाबको समस्याले बर्षेनी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयहरु पिरोलिन्दै आएका छन । बिषेश गरी सुख्खायाम सुरु सँगै जिल्लाको छथर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ ...
विराटनगर / सुनसरी र मोरङमा आज दिउँसो वर्षासँगै चटयाङ परेपछि एकजनाको मृत्यु भएको छ भने चारजना घाइते भएका छन् । सुनसरीको दुहवी–११ का १८ वर्षीय रोशनकुमार ऋषिदेव आफ्ना साथीसँग पिपलको रुखमुनि बसिरहेको समयमा चटयाङ परेपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको १ नं– प्रहरी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले जनाएको छ । उनका साथी २५ वर्षीय मिठू मण्डल गम्भीर घाइते भएका छन्...
इटहरीलार्इ स्थायी राजधानी बनाउने हल्ला निराधार – मुख्य मन्त्री रार्इ
संखुवासभा । १ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी इटहरी सार्ने हल्ला निराधार रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । शनिबार संखुवासभाको चैनपुरमा आयोजित प्रथम मेयर गोल्ड कपको उद्घाटन गर्दै राईले स्थायी राजधानी इटहरी सार्ने हल्ला गलत रहेको बताए । उनले भने, पछिल्लो समय केही मिडियाहरुमा प्रदेशको राजधानी इटहरी सार्ने हल्ला निराधार भएकोले त्यसको पछि नलाग्न अनुर...
यस बर्षपनि किरातहरूले साकेला पर्व धुमधामले मनाउने
धरान । आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पहिचानलाई स्थापित गराउन किरात राई यायोख्खाले आयोजना गर्दै आएको साकेला पर्व उभौली यस बर्ष पनि धुमधामका साथ मनाउने भएको छ । अन्नबाली लगाउने समय अर्थात वैसाखे पूर्णिामा उभौली र अन्य बाली थन्क्याउने समय अर्थात मंसिर पूर्णिमा उद्यौली साकेला पर्वको रुपमा बर्षमा दुई पटक मनाउदै आएका किरात राईहरुले यस बर्ष पनि व...